ဟန်ဆောင်မှုအနုပညာနှင့် တိုနံ့နံ့၊ အပျိုကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဟန်ဆောင်မှုအနုပညာနှင့် တိုနံ့နံ့၊ အပျိုကြီး
ဟန်ဆောင်မှုအနုပညာနှင့် တိုနံ့နံ့၊ အပျိုကြီး
- နောင် ရိုး
Posted by နောင် ရိုး on Jun 25, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 23 comments
ကျနော် ခုတလော အလုပ်လေးအားနေလေတော့ ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးနေတယ်… ပထမတွေးမိတာ အလုပ်က လူတွေအကြောင်းပါ…။ သူတို့ဟန်ဆောင်ကြတယ်ဗျ…။ ကျော်သိတယ်…။
နောက်ကွယ်မှာသာ သေလောက်အောင်မုန်းပြီး ဆွေ့ဆွေ့ခုန်ဒေါပွကြပေမယ့် အဲ့လူရှေ့လဲရောက်ရော…အယ်..ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေ ခုမှပြန်တွေ့ကြသလိုလို၊ အနုပညာရှင်တွေလိုကို….ဟန်ဆောင်နိုင်ကြတယ်ဗျာာာာ..
အလုပ်မှာ ပြိုင်ဘက်က အနိုင်ရသွားလို့ နောက်ကွယ်မှာ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲသောင်းကျန်းဒေါမနသပွားကြပေမယ့် အဲ့ဒီလူရှေ့ရောက်တော့ မျက်နှာမှာ ဟန်ဆောင်ပြုံးတစ်ခု ကောက်တပ်ပြီး Congratulation ဆိုတဲ့စကားကို လှိုင်လှိုင်သုံးနိုင်ကြတယ်…အံ့တယ်ဗျာ… ထူးဆန်းနေတာက အဲ့ဒီလို ဟန်ဆောင်နိုင်တတ်ကြသူတွေဟာ အပေါ်ပိုင်း အထက်ပိုင်းက လူတွေများတယ်ဗျ…။
သူတို့ဟာသူတို့တော့ နေရာတစ်ခုရနေတယ်..အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိနေကြတယ်…အောင်မြင်နေကြတယ်… ဒါဆို…အထက်ပိုင်းရောက်နိုင်သည့် ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ဟန်ဆောင်မှုအနုပညာများ ဖြစ်လေမလား….?
ကောသလအိပ်မက်လို မကောင်းတဲ့လူဆိုးတွေဟာ အထက်ပိုင်းရောက်သွားကြတာလား….။
သူတို့ကို လူဆိုးလို့ပြောလို့တော့ ခင်ဗျားတို့ စိတ်မဆိုးနဲ့ဗျ…။ သူတို့တော်ရင်တော်မယ်..ရိုးသားမှုဆိုတာမရှိတော့တာတော့ အမှန်ပဲ…။
ဒါဆို ကျော်တို့အောင်မြင်ချင်ရင် အဲ့ဒီရိုးသားမှုဆိုတာကို ချနင်းမှ ရတော့မယ်သဘောပေါ့..အဲ့လိုလား…??? တွေးမိတာပါ..
ခုတလော ကမ္ဘာ့ဖလားလေးကလဲ ရှိနေပါ့။ ဖွင့်ပွဲလေးကလဲ အတော်ဟော့ခ် တယ်..။
မစားကောင်းတဲ့ပစ်ဘူးကို ဖယ်…။ ဂျေလိုကိုကြည့်ကြည့်။
သူက XL နီးပါး Medium ဗျ..။
ဒီတော့ ဆက်တွေးမိတယ်…။ တချို့အကိုကာလသားတွေက ကိုရီးယားလို Small Size ကိုကြိုက်ကြတယ်…။ တချို့ကျ ဂျေလိုလိုမျိုး Medium မှ၊ တချို့များ စိုးမြတ်သူဇာတို့လို XL မှ XL…အကြိုက်ချင်းမတူတာ ပြောပါတယ်….
ကောင်မလေးတွေ ဟိုဟိုဒီဒီမြင်နေတယ်…။ စက်ဆီကျ (အဲလေ) Sexy ကျကြပါတယ်…။
ဟိုရေစီးကြောင်းလေးကလဲ ရှိနေလေတော့ သူတို့လဲ တက်ကုန်ဖွင့် ရွက်စုံလွှင့်ကြတာပဲ…။ ခါတော်မှီကိုးးး
ဒါပေမယ့် ဒီကလေးမတွေ မသိကြဘူးဗျ…။ ယောကျာ်းလေးတွေ တကယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါ တိုမယ် ဟိုက်မယ် ပြတ်မယ် ပါးမယ်ထဲက မဟုတ်ဘူး…။ လူငယ်တွေ စိတ်ကိုဦးစားပေး ခိုးပြေးတာမျိုးတော့ မပါဘူးပေါ့ဗျာ…။ ကျော့်အသက်အရွယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒီလို တိုတိုဝတ်ပြီး နန့်နန့်တက် (ကန်တော့ဗျာ) ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းခလေးမျိုးကို ယူဖို့လောက်ထိ မစွန့်စားရဲဘူး…။
ရွာသားတွေတော့ ဘယ်လိုစတိုင်လ်မျိုး ကြိုက်တယ်မသိဘူး….။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပေါ့လေ…။
ကျော်ဘက်ကတော့….ကျော်သဘောကျတဲ့…အပြင်ပန်းအလှတစ်ခုကို အဆိုတင်သွင်းချင်တယ်..။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေပါပြောရင် များကုန်မယ်…အပြင်ပန်းလောက်ပဲပြောတော့မယ်…။
ခင်ဗျားတို့သိလား…တချို့မိန်းခလေးတွေမှာ နားသယ်မွှေးလေးတွေ ရှိကြတယ်…။ ခပ်ရေးရေး နုနုလေးတွေ…။ အဲ့ဒါလေးတွေက နေရောင်အောက်မှာဆို ရွှေရောင်တောက်နေတာာာ။ တချို့မိန်းခလေးတွေကျတော့ ပါးပြင်မှာ သွေးကြောလေးတွေ မြင်နေရတယ်..။ ရင်ခုန်ချင်စရာလေးတွေ..။
ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေမှာ ကျော်လိုက်ကြည့်တာတော့ သူတို့အသားဖြူချင်ဖြူမယ်..၊ သွေးကြောလေးတွေ မပေါ်ကြဘူး…။ မြန်မာထဲမှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက်လောက်ပဲ မြင်မိတယ်…။ ကျော်ချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကတော့ အဲ့ဒီ ၂ ချက်လုံးရှိတယ်…။ နားသယ်စပ်မှာ ရွှေရောင်နုနုလေးတွေအပြင် သွေးကြောလေးတွေလဲ အတိုင်းသားပဲ..။ အဲ့ဒါအပြင် သူ့ပါးလေးကလဲ ဖောင်းနေသေးတယ်…။ လက်ညှိုးလေးနဲ့ တို့ထိကြည့်ချင်စရာ….
ကျော်သာ ကျော့်အတွက် အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးရင်…ကျော်အလုပ်မောမောနဲ့ပြန်လာလို့…အိမ်အ၀င်မှာ သနပ်ခါးလေးပါးပါးလူးပြီး တံခါးဖွင့်ပေးချိန် ကျော်ရင်အေးသွားရမယ့်၊ အမောပြေသွားရမယ့် ကောင်မလေးကိုပဲ ရွေးမယ်….။ မျက်နှာလေးအေးပြီး အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိနေတဲ့သူ၊ အထက်တန်းစားပါလို့ ပြောစရာမလိုဘဲ ဘေးကသိနေတဲ့သူမျိုးးးလေ…
ဒီခေတ်ကောင်မလေးတွေကို ကျော်ကြည့်ကြည့်ပြီး ဒီအတွေးတွေ ပွားတယ်..ပွားတယ်..….။ အဲ့လို ခဏခဏကြည့်ကြည့်မိလေ…အင်းးးးး ဒီရွာသူ ကျော့်ခလေးမလေး မျက်နှာကိုပဲ ပြေးပြေးမြင်မိလေပါလို့…….
ထူးဆန်းတယ်ဗျ….မြင်မြင်နေရ၊ ကြားကြားနေရတာ… စဉ်းစားကြည့်ဗျ…
အိမ်ထောင်မပြုသေးဘဲ အသက်ကြီးနေလို့ အပျိုကြီးခေါ်တာကို အဲ့ဒီအပျိုကြီးတွေက သဘောမကျကြဘူးတဲ့….(ရွာထဲက အပျိုကြီးများကို တိုက်ခိုက်လိုခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပါ…။ တိုက်ဆိုင်မှုအတော်များပါက ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်..)
အလုပ်မှာများ အဲ့အပျိုကြီးကလေလို့စပြောမိရင် မျက်စောင်းက လာပြီ…။ နည်းနည်းများထပ်ပြောမိရင် ငါ့ကိုအပျိုကြီးဆိုပြီး ခေါ်တယ်တဲ့..နောက်ကွယ်အတင်းပြောချင်သေးတယ်…။ ရင်းနှီးတဲ့သူများ ကျော့်ကို တေနာလေးဒဲ့….။ ငင့်..ကျော်ပြောတာ မဟုတ်တာကျလို့…
ဘာလို့လဲဗျ….လှတဲ့ကောင်မလေးကိုလှလိုက်တာလို့ပြောရင် သူစိတ်မတိုဘူး…။ မလှတဲ့ကောင်မလေးကို နင်မလှဘူးပြောရင် သူစိတ်တိုလိမ့်မယ်…။
အမှန်တရားက ခါးနေလို့ဗျ…။ မလှတာဟာ သူတို့အားနည်းချက်ဖြစ်နေလို့…. ဒါဆို အပျိုကြီးတွေက အပျိုကြီးဖြစ်တာဟာ သူတို့အားနည်းချက်လို့သတ်မှတ်ထားလို့များ သူတို့စိတ်တိုကြတာလားမသိ.. ဟုတ်ကြလားဗျာတို့……..
ဆက်စဉ်းစားရင် သူတို့အားနည်းချက်က ယောကျာင်္းမရတာလား..အသက်ကြီးသွားတာလားးး အေးဗျာ……လောကမှာ မှန်နေပေမယ့်လဲ ပြောမရတာတွေ အများကြီးပါ….။ ကျော်ဒီလိုပြောရင် ခင်ဗျားတို့ ဟိုစကားကြီးတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ကြဦးမယ်…။ ဟုတ်ပါတယ်…မှန်လဲမှန်၊ အကျိုးလဲရှိသင့်တာပေါ့..။
အားနည်းချက်တစ်ခုကို အမှန်ပြောရင်သာ လူတွေစိတ်တိုကြတာ…။ အားသာချက်ကိုအမှန်ပြောရင် သူတို့ပျော်ကြမှာပဲ…။ စဉ်းစားလိုက်တာက…အပျိုကြီးဖြစ်ခြင်းကို သူတို့ဖာသာသူတို့ အားနည်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြလို့များ သူတို့စိတ်တိုကြတာလားလို့ပါ….
About နောင် ရိုး
နောင် ရိုး has written9post in this Website..
View all posts by နောင် ရိုး →
“အမောပြေသွားရမယ့် ကောင်မလေးကိုပဲ ရွေးမယ်….။ မျက်နှာလေးအေးပြီး အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိနေတဲ့သူ၊ အထက်တန်းစားပါလို့ ပြောစရာမလိုဘဲ ဘေးကသိနေတဲ့သူမျိုးးးလေ…
ဒီခေတ်ကောင်မလေးတွေကို ကျော်ကြည့်ကြည့်ပြီး ဒီအတွေးတွေ ပွားတယ်..ပွားတယ်..….။ အဲ့လို ခဏခဏကြည့်ကြည့်မိလေ…အင်းးးးး ဒီရွာသူ ကျော့်ခလေးမလေး မျက်နှာကိုပဲ ပြေးပြေးမြင်မိလေပါလို့……. ”
မြန်မာပြည်တွင် နေရာအတော်များများမှာ ရိုးသားစွာပြောဆို ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်တတ်သူများ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာစွာ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံ ပြောဆို လုပ်ကိုင်တတ်သူများ နုံအသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရကာ နေရာမရပါ။ သူတစ်ပါးကို ကျော်တတ် နင်းတတ်သူများ၊ ဟောက်စားလုပ်တတ်သူများသာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံရကာ နေရာရကြပါသည်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် မြန်မာပြည်မျိုးဆက်တွေရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေ ခံယူကျင့်သုံးပုံတွေ ပြောင်းလဲတိုးတက်မည်မဟုတ်သည့်အတွက် တိုင်းပြည်အနာဂတ်လည်း တိုးတက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘ၀တစ်သက်တာအတွက် လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်ရာမှာ အပြင်ပန်းအလှကိုအဓိကထား ရွေးချယ်တာကို မထောက်ခံပါ။ အပြင်ပန်းအလှက တခဏတာအတွက်သာ သာယာပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘ၀တစ်သက်တာ မိမိနှင့်အတူ လောကဓံကို အတူရင်ဆိုင်နိုင်မည့် အချက်တွေကိုအလေးထားကာ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားပေါင်းစပ်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းက ပိုကောင်းသည် ထင်ပါသည်။
“မြန်မာပြည်တွင် နေရာအတော်များများမှာ ရိုးသားစွာပြောဆို ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်တတ်သူများ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာစွာ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံ ပြောဆို လုပ်ကိုင်တတ်သူများ နုံအသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရကာ နေရာမရပါ။ သူတစ်ပါးကို ကျော်တတ် နင်းတတ်သူများ၊ ဟောက်စားလုပ်တတ်သူများသာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံရကာ နေရာရကြပါသည်။ ”
မှန်သဗျ @ မပန်းစံပါယ် ရေ……ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်….ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆို…ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ…
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်….အင်း.မကြာခင်မှာပဲ အပျိုကြီး တစ်သိုက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်
ကိုနောင်ရိုး ရ…ခီများနာမည်လိုပါပဲ ဘယ်လောက်ပဲ အမောပြေသွားရမယ့် ကောင်မလေးကိုပဲ ရွေးမယ်….
ပြောပြော…နောင်ကြာတော့လည်းရိုးသွား တာပါပဲ ကိုနောင်ရိုးရေ
ဟောက်စားလုပ်တတ်သူတိုင်းဟာ management ကောင်းသူဖြစ်မလာနိုင်ပါ…။ ခဏတာ အလုပ်ခွင်မှာ အဆင်ပြေကောင်းပြေမယ်ပေမယ့် လူမုန်းများပြီး ၀န်ထမ်းတွေစိတ်မသက်သာဖြစ်မှာကတော့ အသေအချာပါ..။
လက်တွဲဖော်ကို အပြင်ပန်းနဲ့ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ….။ လမ်းပေါ်တွေ့နေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုကြည့်မြင်ပြီး ဒီလိုတွေဝတ်စားပေမယ့် ယောကျာင်္းလေးတွေ တန်ဖိုးထားနိုင်သူ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်..
လက်တွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်…သူ့ရဲ့ စိတ်ထား၊ မိသားစုအပေါ်ဆက်ဆံတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတာအပြင် သူ့ရဲ့ လင်ယောကျာင်္းတစ်ယောက်အပေါ် အိမ်ထောင်တစ်ခုပေါ်ထားတဲ့ ခံယူချက်တွေလဲ လိုပါတယ်..။ ပြီးတော့ သူ့အသိပညာဟာ ကိုယ့်အသိပညာနဲ့ တန်းတူမဟုတ်တောင် အရမ်းမြင့်နေတာ၊ အရမ်းနိမ့်နေတာ မဟုတ်ဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်..။ နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုရှိဖို့တွေ…ဒါတွေ ပြောရရင် အများကြီးပါပဲ…။
Comment လာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မပန်းစံပါယ်…
ဒါတော့ နောက်ပိုင်း သံယောဇဉ်ဆိုတာနဲ့ သွားရမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျ ကိုကြီးမိုက်…။
ကျော့်စိတ်ထဲတော့ မိတ်ကပ်ထူလဗျစ်တွေထက် သနပ်ခါးပါးပါးသာ အမောပြေတယ်လို့ ဆိုလိုရင်းဖြစ်ကြောင်းပါ…။
Comment အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ… မျှော်နေတာဗျ….
Comment လေးတွေ လာကြ..လာကြ…
သူငယ်ချင်းအပျိုကြီးတစ်ယောက်ကတော့ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် အပျိုကြီးလို့ ခေါ်တာကို ကြိုက်တယ်။
အဲလိုခေါ်ရင်းနဲ့ ကြော်ငြာပေးသလိုဖြစ်ပြီး စွံသွားပါပကောလား အမောင်နောင်ရိုးရေ။
ဖော်တာ ချွတ်တာ ပြတာဟာ
အဲဒါမျိုးနဲ့ အဲဒီမိန်းကလေးနောက် ပါသွားတာဟာလည်း
တော်တော် လွယ်တဲ့ ယောကျာ်းပဲပေါ့
ဟန်ဆောင်တာကို မကြိုက်ဘူးပေါ့။ အရှိကို အရှိအတိုင်းပေါ့။ ဒီလိုလား။
(၁) ယောက်ျားများ အဆင့်အတန်းရှိပါက မိန်းမများ အဆင့်အတန်း ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ( အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ယောက်ျားများ အောက်တန်းကျသောကြောင့် မိန်းမများ အောက်တန်းကျခြင်း ဖြစ်၏)
(၂) အပျိုကြီးတွေ အပျို ကြီးဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းမှာ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်၏။ ၄င်းမှာ မာနကြီးခြင်းကြောင့်သာ။ တခြား ဘာဆိုဘာမှကို မဟုတ်။
(၁) သများ ဟန်ဆောင်တတ်ပါတယ်.. ပက်ပက်စက်စက်ကို ဟန်ဆောင်တတ်ပါတယ်..
အဲ..မဆောင်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း ပါးစပ်ကနေ စက်သေနတ်ပစ်ပါတယ်… ဘီလူးဆိုင်းတီးပါတယ်…
(၂) သများ သနပ်ခါးကြိုက်ပါတယ်.. အညာက သူငယ်ချင်းတွေဆို သနပ်ခါးတုံးပဲ လက်ဆောင်တောင်းမိလောက်အောင်ကို ကြိုက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. ပြေးပြေးလွှားလွှားသွားသွားလာလာ ခေတ်ထဲရောက်နေတော့ သနပ်ခါးသွေးရ..ဖုံအောင်လူးရ..ပါးကွက်ညီအောင်ကွက်ရလို့ အချိန်နာရီဝက်ပေးရမယ့်အစား foundation လိမ်း၊ cream puff လေးလိမ်း လုပ်တာက ၁၅ မိနစ်တောင် အချိန်မပေးရလို့ ပိုမြန်တာကိုပဲ ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်.. သများချစ်သူကတော့ ဘိုပဲဖစ်ဖစ် လှတယ်ပြောတာပဲ .. ဟိ
(၃) အပျိုကြီးမဖြစ်ခင် အပျိုကြီးအခေါ်ခံရတာကို သဘောကျပါတယ်.. အပျိုကြီးတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မိမှာပါ.. ဒါမယ့်.. သေချာတာက.. သများ အပျိုကြီးမလုပ်ပါဘူးချင့်.. ငိငိ..
၁) ဟန်ဆောင်တိုင်း မကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆ မိပါတယ် ခင်ဗျ။
အကိုပြောတဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်း မျိုးတွေ ဆိုရင် ရင့်ကျက်တာလို့ ထင်မိပါတယ်။
လူတစ်ယောက် ကို ဒေါသထွက်လို့ သွားဆဲမယ့် အစား သူ့ရှေ့မှာ အိနြေ္ဒ မပျက် နေနိုင်တာ က ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့် မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။
ကိုယ် ကြည့်မရတဲ့ လူတစ်ယောက် အောင်မြင် သွားတာကို မင်းနဲ့မတန်ပါဘူးကွာ လို့ ပြောမယ့် အစား Congratulations လိုက်ရတာက ပို သင့်တော်ပါတယ်ဗျာ။
အဲ့လို စိတ်ခံစားချက်တွေ ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ လူတွေပဲ ဒီလို ရာထူးမျိုး နဲ့သင့်တော် ပေတော့မပေါ့။
မဟုတ်ရင် အဘ တို့လို ကြီးကောင့်ကြီးမား ကျမှ စကားမှားလို့ လူဝိုင်းဆဲတာချည်း ခံနေ ရပေမပေါ့။:P
၂) အဲ့လို ဖော် မှ ကိုယ့်ကို လူတွေ သဘောကျမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုရော ဖော်မှ လှတယ် ထင်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေ ကို ရော သနားမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖော်မှ လှမယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက် ကို ဘယ်လိုတွေးမိသလဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းမို့ အကုန်ဖွင့်ပြထားရသလိုလို။
ယဉ်ကျေးဖို့ကျက်သရေရှိဖို့ တင့်တယ်ဖို့ ဆိုတာတွေက ပိုပြီး အရေးပါမှန်း မသိလေရော့သလား။
ယောက်ျား တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ အဲ့လို မိန်းကလေးမျိုး မြင်ရင် ပီကေ လိုကို သဘောထားမိတယ်။ဝါးပြီး ထွေးထုတ်ပေါ့။
၃) အပျိုကြီးတွေ ထဲမှ ယောက်ျား မရသော အပျိုကြီးက သူ့ကို အဲ့လိုခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးပြီး ယောက်ျား မလိုချင်သော အပျိုကြီးကတော့ အေးဆေးပဲ ပြုံးနေပါကြောင်း။
Bravo. Best Comment. :-))))
Mee Wah says:
စိတ်ဓါတ်ကောင်း၊အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတာ၊နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာ အဆင့်အတန်းရှိတာ ကိုရွေးပေါ့….ပြန်လန်နေတာတွေက ခဏတာတွေပါ..အရေပြားတစ်ထောက်စာတွေ….ကိုနောင်ရိုးက ခေတ်လူငယ်ဖြစ်ပြီးဒီလိုအတွေးအခေါ်ရှိတာလေးစားပါတယ်…ခုခေတ်က သိတယ်မလား ပေါ်မှ၊ဖော်မှ ကြိုက်တယ်…စော်လန်းလန်းလေးတွေတွေ့ရင်
ဘေးမှာရည်းစား၊မိန်းမကြီး ငုတ်တုတ်ပါတာတောင် သရေတမြားမြားနဲ့ နှာဘူးတွေက ပိုများတယ်…တိုက်ဆိုင်တဲ့သူများရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့….ဟီး….
တကယ် ပြောရ ရင်တော့
ယောကျာ်း ရယ် မိန်းမရယ် နဲ့ လုံးပြီး ပြော လို့ မရ ပါ ဘူး
လူတစ်ယောက်ခြင်းစီရဲ့ အမူ အကျင့် နဲ့ ဘဲ ဆိုင် ပါတယ်။
ဘူလဲ ဆိုတာ နာ သိတယ် အော့ကြော။
နာ့ ကို ကျော်ပြီး ဘယ် သတင်းမှ ဖွက်ထားလို့ မရဝူးးး
ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ်ဗျ…ကိုယ့်ခံစားချက်ကို သိမ်းတတ်တာပညာ..။ ဒါပေသည့် နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတာတော့ ဟုတ်သေးဘူး..။ ရှေ့ကလာတဲ့သူနဲ့ နောက်ကလာတဲ့သူ ဒါမျိုးကွာတာ ဆိုလိုဒယ်…
ရွာထဲက ကျော့်ကောင်မလေး ဘူလဲ ပြောဝူး…
ပြောရင် ကျော့်ကို သူစွာလိမ့်မယ်….
ဟို လူမိုက် ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး၊
သိတယ်ပေါ့..ယုန်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောမရဘူး အိုက်ဒိ နာမည်များနဲ့မမက။
တစ်လက်စထဲ ရွာထဲက နှူးဘာတွေ တစ်ယောက်မှ ကျိမရဘူး…
အဲဒီလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ.. အိမ်ထောင်မကျတဲ့.. အပျိုတွေများလာတာဟာ.. ယောက်ျားတွေအသုံးမကျလို့.. လို့တိုက်ရိုက်ပြောလိုပါတယ်..။
နိုင်ငံလိုက်မှာ.. အပျိုကြီးအရေအတွက်များနေတယ်ဆိုရင်… အဲဒီနိုင်ငံက.. ယောက်ျားတွေ.. အသုံးမကျတာ.. များတယ်လို့မှတ်..။
သူများကို မထိခိုက်သော ဟန်ဆောင်မှု ကတော့ ကောင်းတာများပါတယ်။
အရပ်မြင့်မြင့် ပေါင်တန်သွယ်သွယ် အသားဖြူဖြူ ကောင်မလေး တွေ ကတော့ စကပ်တိုတို လေးဝတ် တာ အတော်ကြည့်ကောင်းပြီး လှပါတယ်။
အရီးက အပျိုကြီး တွေ နဲ့ အကျိုးပေးကောင်းသူပါ။
အမေ တို့ ညီအစ်မ ၃ယောက်မှာ ၂ ယောက်က အပျိုကြီး။
ဝမ်းကွဲညီအစ်မတွေ ရှိတာ ၃ယောက်မှာ ၂ ယောက်က အပျိုကြီး။
ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း ၉ယောက်တွဲတာ ၄ယောက် ကအပျိုကြီး။
ရွာထဲ ရှားရှားပါးပါး ကောက်ရတဲ့ သွေးသောက်ညီအစ်မ ၃ယောက်လုံး အပျိုကြီး။
ကိုယ်တောင်မှ တစ်ချက်လေး အငိုက်မိ သွားတာမို့ ကံမကောင်းစွာ အပျိုကြီး ဂုဏ်ပုဒ် ကနေ လွဲ သွားရတာ။
အပျိုတွေများလာတာဟာ.. ယောက်ျားတွေအသုံးမကျလို့.. ဆိုတာ။
ဒီ အသုံးမကျတာတွေ ကို သတိကောင်းကောင်း နဲ့ ရှောင်နိုင်တဲ့ အပျိုကြီး များအား အလေးအနက်ထား ဂုဏ်ယူပါ၏။ :-)))))
“အပျိုတွေများလာတာဟာ.. ယောက်ျားတွေအသုံးမကျလို့.. ဆိုတာ။” အဲ့လို ဆိုတော့ကာ
ဟိုးလွန်လေပြီးသော အတိတ် တစ်ခု က သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး တစ်ယောက် ပြောတာ သွားသတိရတယ်။
“တောက် ငါ သာ ယောက်ျား ဖြစ်လို့ကတော့ကွာ….” တဲ့…
“အပျို တွေ ရှားသွားမယ်” ဆိုပဲ…
ဒီဘက်က လူတောင် ဘာဆက်ပြောရမယ်မှန်း မသိ ဖြစ်သွားရှာတယ်…
ဟုတ်မှာပါ ယောက်ျားတွေ အသုံးမကျလို့ ဆိုတာ ဟီးဟီးဟီး